एमालेमा ओलीको उत्तराधिकारी खोजी : को बन्दैछ शक्तिशाली महासचिव ?
दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा वर्तमान अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोहोरिने निश्चित जस्तै भएपछि एमालेमा धेरैजसो नेता/कार्यकर्ताको ध्यान महासचिवमा केन्द्रित भएको छ ।
यद्यपि, एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका छन् । ओली ‘प्राधिकार’ एमालेमा रावलको जीत निस्कने सम्भावना नगण्य छ ।
ओली आगामी पाँच वर्ष पार्टी नेतृत्वका लागि आफू अनुकूलको टीम बनाउने योजनामा छन् । त्यसका लागि उनले सर्वसम्मतिको विकल्प रोजेका छन् ।
महाधिवेशनमा निर्वाचनबाट नभई सहमतिबाट नेतृत्व चयन गर्ने तयारी भएपछि ओलीले कसलाई महासचिव बनाउलान् भन्ने चासो एमाले कार्यकर्तामाझ छ ।
एमालेमा वरीयताको हिसाबले महासचिव सातौं पद हो तर, जिम्मेवारी र कार्यकारी हैसियतमा महासचिव अध्यक्षपछिको महत्त्वपूर्ण पद हो । महासचिवलाई समग्र संगठन व्यवस्थित गर्ने र आवश्यक पर्दा प्रशासनिक डण्डा चलाउने अधिकार पनि हुन्छ ।
एमालेमा अहिले जो व्यक्ति महासचिव बन्छ, त्यही व्यक्ति ११ औं महाधिवेशनमा पार्टी नेतृत्वको दाबेदार हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यसो हुँदा पनि दशौं महाधिवेशनबाट को महासचिव बन्ला भन्ने कार्यकर्ताले चासोपूर्वक हेरेका छन् ।
अहिले एमालेमा मुख्यगरी विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र शंकर पोखरेल महासचिवका दाबेदार छन् । त्यसबाहेक, पृथ्वीसुब्बा गुरूङ पनि महासचिवको लबिङमा छन् ।
ओली निकट एमाले नेताहरू भने ओलीले महासचिवको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्नेबारे व्यक्तिगत रूपमा निर्णय गरिसकेको बताउने गरेका छन् ।
ओलीनिकट एक नेताले भने, ‘अध्यक्षले महासचिवको बारेमा निर्णय गरिसक्नुभएको छ । सहमतिमै नेतृत्व चयन हुने हुँदा उहाँले भनेकै व्यक्ति महासचिव हुन्छन् । एमाले कार्यकर्ताले पनि को महासचिव भन्ने आकलन गरिसकेका छन् ।’
पौडेलको सम्भावना प्रबल
एमालेमा उपमहासचिवको जिम्मेवारीमा रहेका विष्णु पौडेल संगठन विभाग प्रमुख पनि हुन् । एमाले अध्यक्ष ओलीका विश्वास पात्र समेत रहेका पौडेलले पार्टीमा समन्वयकारी नेताको पहिचान बनाएका छन् ।
२०७४ मा एमाले र माओवादी केन्द्र एकता गरेर नेकपा बनाउने बेलामा ओलीको सबैभन्दा निकट रहेर काम गरेका थिए, विष्णु पौडेलले । त्यसबेला ओली र प्रचण्ड दुवैको विश्वास जितेका पौडेल दुई पार्टी मिलेर बनेको विशाल पार्टी नेकपाको महासचिव भए । एमालेको महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव ईश्वर पोखरेल पछाडि परे ।
त्यतिमात्रै होइन, एमालेका तत्कालीन उपाध्यक्षहरू युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावलमध्ये कोही पनि नेकपा सचिवालयमा समेत पुग्न नसक्दा पौडेलले महासचिवको भूमिका पाए । ओलीले विश्वास गरेको र पार्टी एकतामा योगदान पुर्‍याएका कारण उनी महासचिव बन्न सकेका थिए ।
विष्णु पौडेलको अर्को क्षमता छ, नेता कार्यकर्तासँग चाँडो घुलमिल हुन सक्ने । उनले नेताको पनि चाँढै विश्वास जित्न सक्छन् । नेकपाकालीन समयमा र अहिले एमालेमा पनि संगठन विभाग प्रमुख भएर काम गरेका कारण पौडेलले देशभरका नेता कार्यकर्तामाझ सम्बन्ध बनाएका छन् । संगठन विभागमा काम गर्दा उनको काममाथि कसैले प्रश्न उठाउन सकेको छैन ।
पार्टीमा मात्रै होइन, सरकारमा पनि उनले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । पौडेल रक्षा र अर्थसहित उपप्रधानमन्त्री भइसकेका छन् । उनी दुईपटक अर्थमन्त्री हुँदा ल्याएको बजेट लोकप्रिय बन्यो ।
एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशनमा एमालेको विधान संशोधन गरी आगामी पार्टी संरचना कस्तो बनाउने भन्ने निर्धारण गर्न उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए ।
२०७४ को निर्वाचनमा पौडेलले रूपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर– २ बाट २२ हजारभन्दा बढी मत अन्तरले प्रतिनिधि सभा सदस्य जितेका थिए । २०७० को चुनावमा पौडेल तत्कालीन माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई चुनाव हराएर चर्चित भएका थिए ।
एमालेमा अध्यक्ष ओली र नेता माधव नेपालबीचको अन्तर्विरोध समाधान गर्न पौडेलले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । विवाद समाधान सुझाव कार्यदलमा बसेर उनले दुवै नेतालाई मिलाउने प्रयास गरे । एमालेमा चर्चित १० बुँदे सहमति पौडेल अर्थमन्त्री हुँदा उनकै कार्यकक्षमा तयारी भएर हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यसबाहेक, माधव नेपाल खेमाले एमाले छाडेर नयाँ पार्टी बनाउँदा धेरैजसो नेता कार्यकर्तालाई माधव नेपाल पक्षमा जान पौडेलले नै रोकेका थिए ।
एमाले विभाजनको अन्तिम समयसम्म पनि पौडेलले माधव नेपालको निवासमा गएर पटक–पटक छलफल गरेर विवाद समाधानका लागि पहल गरेका थिए । भलै, यसमा भने उनी सफल हुन सकेनन् ।
पार्टीको संगठन विस्तार र आवश्यक पर्दा आर्थिक व्यवस्थापनमा समेत पौडेलले सक्षमता देखाएका कारण ओली पौडेलसँग अनुगृहीत रहेको ओलीनिकट नेताहरू नै बताउँछन् ।
पौडेलले पनि भविष्यमा एमालेको नेतृत्व सम्हाल्ने योजनासहित रणनीतिक हिसाबले काम गरिरहेका छन् ।
संगठन र संसदीय दुवै क्षेत्रमा सफलता हासिल गरेका पौडेल पार्टीमा अध्यक्षको असाध्यै सानिध्यमा रहेर काम गरिरहेका छन् ।
महाधिवेशनबाट सहमतिमा महासचिव बनाउँदा होस् वा निर्वाचनबाटै महासचिव छान्दा, दुवैमा पौडेल एमाले महासचिव बन्ने सम्भावना प्रबल छ ।
पोखरेललाई ओलीसँगै राष्ट्रपति साथ !
एमाले अध्यक्ष ओलीका अर्का विश्वासपात्र शंकर पोखरेल एमालेभित्र जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)को व्याख्याता हुन् । ओली खेमामा सबैभन्दा तार्किक र वैचारिक नेताको रूपमा पोखरेललाई लिइन्छ ।
पोखरेलसँग २०६६ मा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सूचना तथा सञ्चार मन्त्री र २०७४ मा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएर राजकीय जिम्मेवारी निर्वाह गरेको अनुभव छ ।
एमालेको नवौं महाधिवेशनमा पोखरेलले घनश्याम भुसालसँग उपमहासचिवमा हारेका थिए । त्यसयता उनी एमालेको स्थायी समिति सदस्य छन् ।
तत्कालीन नेकपामा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच खटपट हुँदा दुई नेतालाई मिलाउन पोखरेलले भरमग्दुर प्रयास गरेका थिए । त्यसबेला दुई नेताको विवाद समाधान गराउन उनी हरेक साता लुम्बिनीबाट काठमाडौं धाइरहन्थे । उनले ओली र प्रचण्डसँग पटक–पटक एक्लाएक्लै भेटवार्ता गरेर विवाद मिलाउने प्रयास गरेका थिए ।
पौडेल र पोखरेल दुवैको राजनीतिक भूगोल भने लुम्बिनी प्रदेश हो । पौडेल बुटवल र पोखरेल दाङबाट निर्वाचन जितेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी तोक्ने सन्दर्भमा भने यी दुवै नेता आमनेसामने भएका थिए ।
पौडेल बुटवलमा राजधानी राख्न चाहन्थे भने पोखरेल दाङ लैजान चाहन्थे । अन्ततः राजधानी तोक्ने विषयमा पोखरेल नै सफल भए । पोखरेललाई ओली र प्रचण्ड दुवैको सहयोग भएकै कारण उनले लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी दाङ लैजान सफल भएका थिए ।
एमालेको आन्तरिक राजनीतिमा बलियो ‘फ्याक्टर’ बनेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको बलियो साथ पोखरेललाई छ । महाधिवेशनबाट सहमतिमा नेतृत्व चयन गर्दा पोखरेलले राष्ट्रपति कार्ड प्रयोग गर्न पनि सक्छन् ।
एमालेको यो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष ओली पार्टीमा आफ्नो उत्तराधिकारी पनि तयार गर्न चाहन्छन् । एमाले वृत्तमा ओलीको उत्तराधिकारीको रूपमा पौडेल र पोखरेललाई लिने गरिन्छ ।
त्यसो हुँदा ओलीले पोखरेललाई पार्टीमा महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन सक्छन् । तर, निर्वाचनबाट महासचिव छनौट गर्दा पोखरेल महासचिव बन्ने सम्भावना भने कम देखिन्छ ।
पाण्डेको निरन्तर लबिङ
एमालेमा स्थायी कमिटी सदस्य रहेका सुरेन्द्र पाण्डे नवौं महाधिवेशनमा ६ मतका कारण महासचिव बन्न पाएनन् । त्यसबेला ईश्वर पोखरेलले महासचिव जिते । नवौं महाधिवेशनमा एमालेभित्र आफ्नो बलियो पकड रहेको भन्ने चाहिँ प्रमाणित गर्न सफल भए ।
तत्कालीन नेकपामा अध्यक्ष ओली र प्रचण्ड तथा माधव नेपालबीचको अन्तरविरोधमा प्रचण्ड– नेपाललाई साथ दिएका पाण्डे झण्डै नेकपाको महासचिव बनेका थिए । केपी ओलीले पुस ५ मा संसद् विघटन गरेपछि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएको थियो ।
प्रचण्ड–नेपाल समूहले ओलीलाई पार्टीबाट निकालेर प्रचण्ड र नेपाललाई अध्यक्ष घोषित गरेको थियो । त्यसबेला पार्टीको महासचिवको रूपमा पाण्डेको चर्चा थियो ।
तर, पार्टीभित्र उनको नाममा सहमति नबन्दै फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा साविकको एमाले र माओवादी केन्द्रमा विभाजित भयो ।
त्यसपछि पनि ओलीसँग नेपाल खेमाले संघर्ष जारी राखेको थियो । त्यसबेला पाण्डे माधव नेपालको साथमा थिए । त्यसबेलाको भेला तथा बैठकमा पाण्डेले नै महासचिवको भूमिका निर्वाह गरेका थिए । बैठक सञ्चालन र भेलाको उद्घोष पाण्डेले नै गर्ने गरेका थिए ।
माधव नेपाल समूह एमालेबाट विभाजित भएर जाँदा पाण्डेले भने मूल पार्टी एमाले नै रोजे । त्यसयता भने उनी निरन्तर अध्यक्ष ओलीसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउने प्रयासमा छन् ।
पाण्डे अहिले एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमिटीको सह–संयोजक र जनपरिचालन कमिटीको संयोजक भएर काम गरिरहेका छन् । उनको निर्वाचन क्षेत्र भएको चितवनमा नै हुन लागेको एमालेको महाधिवेशन सफल र भव्य बनाउन उनी खटिरहेका छन् ।
यसअघि महाधिवेशनको उम्मेदवार भइसकेकाले त्यसभन्दा तलको पदमा असहज हुने बताउँदै आएका पाण्डे महाधिवेशनबाट महासचिव बन्ने तीव्र अभिलाषासहित उनले अध्यक्षको सानिध्य खोजिरहेका छन् । सञ्चारमाध्यमहरूमा अन्तर्वार्ता दिएर एमाले नेतृत्वमा अहिले ओलीको विकल्प नभएको पाण्डेले बताउन थालेका छन् । तर, केही अघिको विगत पल्टाउँदा पनि पाण्डे ओलीलाई धुरन्धर गाली गरिरहेका भेटिन्थे ।
एमालेमा पहिले माधव नेपाल खेमालाई निरन्तर पेलेको आरोप ओलीमाथि छ । यो आरोपलाई चिर्न पार्टीमा कसैलाई पनि काखा र पाखा गरिएको छैन भन्ने सन्देश दिन पनि ओलीले उनीहरूमध्ये कसैलाई मुख्य जिम्मेवारीमा ल्याउन आवश्यक छ । पाण्डेलाई महासचिव बनाएर ओलीलाई पार्टीमा सबै पक्षलाई समेटेको सन्देश दिने अवसर पनि छ ।
यसबाहेक, एमालेका सचिवमध्येका एक पृथ्वीसुब्बा गुरूङले पनि महासचिवमा दाबी गरेका छन् । उनले अध्यक्ष ओलीलाई भेटेरै महासचिवको रूपमा उनले चाहेको जस्तो पार्टी बनाउन योगदान गर्न सक्ने भएकाले अवसर दिन भनेका छन् । तर, उनका निकटहरू भने उपाध्यक्ष वा उपमहासचिव पद पाउँदा गुरूङले महासचिवको दाबी सजिलै छाड्न सक्ने बताउँछन् ।
चीनसँग नजिकिन खोज्दा पश्चिमले गिजोलेको सोलोमन आइल्...
डेटा ट्र्याप, डेट ट्र्याप र डेमोक्रेसी ट्र्याप !
कांग्रेस संस्थापनइतरमा ‘लिगेसी’को लडाईंः सभापतिको...